जेष्ठनागरीक र लक्षितबर्गको सामाजिक सुरक्षा भक्ता झुम्कामा टेन्ट लगाएर बितरण -
जेष्ठनागरीक र लक्षितबर्गको सामाजिक सुरक्षा भक्ता झुम्कामा टेन्ट लगाएर बितरण
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २१, २०७४ समय: ११:२०:१४
झुम्का,चैत्र २१ । नेपाल बैङ्क लिमिटेड झुम्कामा मंगलवार सुरक्षा भक्ता लिन आएका जेष्ठनागरीक र लक्षितबर्गहरु बैङ्क अगाडि टेन्टमा बसेर पालैपालो बुझेका छन् । बैङ्क निर्धारित कार्यालय समयमा खुल्दा त्यतीबेला सम्म चर्को घाम लाग्ने भएकाले त्याहा उनीहरुको सुबिधाकालागी टेन्ट र खानेपानि समेत ब्यवस्थापनगरी बितरण भएको हो ।
दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट भत्तावापत खाईपाई आएका जेष्ठनागरीक अन्य,दलित जेष्ठनागरीक,एकल तथा बिधवा,अत्ति असक्त तथा पुर्ण अपाङ्ग र बालबलिका दलित सुरक्षा भक्ता बितरण भएको छ । एकल तथा बिधवालाई सुरक्षा भक्ता चौमासिक रुपमा ४ हजार उपलबधगराई रहेको छ भने ७० बर्ष भन्दा माथिकालाई थप औषधि उपचारखर्चकालागी ४ हजारगरी ८ हजार पाउछन् । त्यसैगरी आंसिक अपाङ्ग २ हजार ४ सय र पुर्ण अपाङ्गले ८ हजार पाउदै आएको रामधुनी वडा नं ६ का वडा सचिव नन्द कुमार श्रेष्ठले बताए । वडा नं. ६ मा भक्तापाउने एकल तथा बिधवा महिला २९३ जना,जेष्ठनागरीक १५७ जना,दलित जेष्ठ १९,दलित बालबालिका ५०,आंसिक अपाङ्ग १९ जना र पुर्ण अशक्त १० जनाले लिदै आएको श्रेष्ठले बताए । त्यसतै वडा नं. ७ मा एकल बिधवा २८० जना,जेष्ठ २२७ दलित जेष्ठ २४,अति अशक्त अपाङ्ग ३२,पुर्ण अपाङ्ग ८ र दलित बालबालिका १२ जना रहेको सहलेखापाल कमला अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
वडा कार्यलयमा भक्ता लिनआएका ७४ बषिय छेदीलाल चौधरीले सहज रुपमै पाईराखेको बताए । त्यसैगरी किसनी थरुनीले पनि आफु सहजरुपमै पाईरहेको बताईन् । वडा कार्यालय सम्म पुग्न नसक्नेलाईभने घरमै गएर बितरण गरीरहेको वडा सचिव श्रेष्ठले बताउदै असारबाट बैङ्क मार्फत उपलबध हुने समेत बताए ।